Ahịa Injin Ọchụchọ, PPC na SEO Blog
Tag: Tụọ CP
Wenezde, August 10, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Anyị enweela ihe ịma aka na ihe ọchị nke isoro ndị ahịa ole na ole na-arụ ọrụ na ndụmọdụ iji were saịtị mba ha mgbe ọ bịara SEO. Anyị nwekwara ndị ahịa ndị ọzọ achọghị ibuli elu mba ụwa mana ha na-enweta ọtụtụ ahịa mba ofesi. Inweta igwe ihe nchoputa dika Google ka ghota ebumnuche gi maka ime obodo ma obu ihe omuma nke uwa adighi nfe ka idobe mba a choro na Webmaster… Na-agbasapụ
Iwu Mgbasa Ozi Google - Soro Iwu Ndị ahụ!
Saturday, April 30, 2011 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Chris Bross
Agbagharala mgbasa ozi ederede gị maka ndebanye aha ederede ma ọ bụ ụghalaahịa? Ọ bụrụ n’ị mere ihe niile n’ụzọ ziri ezi, gịnị kpatara Google na-eji iti mkpu nye gị? AdWords anaghị agwa gị ozugbo, ọtụtụ mgbasa ozi ederede iji nyochaa n'otu oge. Ha nwere algọridim ha nke gha achoputa ederede ederede gi ma oburu na imeghari iwu ha. Nchọpụta bụ mgbe eziokwu gasịrị na enweghị ọtụtụ ozi na ihe kpatara ya. Na-akụda mmụọ! N'ezie ị na-enweta a
Wednesday, February 16, 2011 Wednesday, February 16, 2011 Chris Bross
Ọ baghị uru n ’ụdị agụmakwụkwọ izizi ị tinyere n’ime nkwekọrịta ọhụụ, otu Onye Nchọpụta Injin Ngini Nchọpụta ga-apụta mgbe ị na-atụghị anya ya. Achọpụtala m ndepụta dị mkpirikpi nke Villains nke anyị, na EverEffect, yiri ka ọ ga-abịa mgbe anyị na-atụ anya ọhụụ ọhụrụ. Nwere ike ịghọta otu n'ime ndị a? Enweghi Ebum n’uche - agwala ego ole I choro imefu, gwa m ego ole ichoro ime n’ime ihe nile
Ọtụtụ ndị folks na-emefu ma na-ere oge ha na njikarịcha nke weebụsaịtị ha, ma na-agbagha isi ha mgbe saịtị ọzọ nwere ọkwa dị elu mana emeghị ka ọ dị mma. Ọ bụ n'ihi na ịmepụta ọdịnaya bụ naanị ọkara agha, ọ na-adọrọ uche nke saịtị ndị ọzọ na-akpali saịtị gị n'ezie Nsonaazụ Ọchụchọ. Ọrụ nchọta ọrụ ahụ bụ ịnye nsonaazụ dị mkpa. Ọ bụrụ na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ a na-akwanyere ùgwù na-atụ gị aka
WordPress: Yiri Post Tweaking
Tuesday, January 1, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, otu n'ime plugins gị achọrọ kwesịrị ịbụ njikọ mgbakwunye Post. Nke ahụ kwuru, achọpụtara m na olu nke isiokwu ndị a na-ezigara na Daily Reads m na-akụda nsonaazụ Post metụtara. Dị ka nke ọma, O juru m anya na ngwa mgbakwunye Related Posts naanị nyere ndepụta nke ederede metụtara ya tupu post ị na-agụ! Gịnị ma ọ bụrụ na ị gbanwere obi gị (dị ka m na-emekarị!)) Ekwesịghị gị
Ọbara Blogger na-agbapụta ka SEO na-agbasa ihe omuma
Fraịdee, Nọvemba 30, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ihe si n'aka Christina Warren: Nye anyị, ụdị mwakpo SEO ekpughere n'izu a bụ nanị ole na ole site na ihe nke ndị na-ede blọgụ / weebụsaịtị na-eme kwa ụbọchị: kpachaara anya gbalịa igwu egwuregwu ọchụchọ naanị ka ha wee nwee ike ịbawanye na saịtị ha, na ndọtị, ma eleghị anya, na-eme ka a ole na ole mmezi dollar. O gwụla ma ị na - agba ọsọ - jikọtara ụzọ ma ọ bụ nwee nnukwu ihu ọma - ọkwa njin kachasị elu na ụwa bụ
Emere m na vidiyo a na mberede, mana ọ bara uru ile ya. Enwere ezigbo ihe ị ga - eme iji bulite blog gị maka igwe ọchụchọ. Ọ bụ ihe ọtụtụ ndị folks na-etinye oge na ya, mana ha kwesiri! Vidio ahụ sitere na ogbako WordPress, WordCamp 2007, nke emere na July (nke m na-ewute na echefuru m).